မြန်မာ- ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | Ministry Of Information
မြန်မာ - ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ဦးစွာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ဝန်ကြီးချုပ်တို့သည် ပဏာမနှုတ်ခွန်းဆက် စကားများပြောကြားပြီး အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား အပြန်အလှန် မိတ်ဆက်ပေး ကြသည်။
ယင်းနောက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN က ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် ကူညီ ဆောင်ရွက်မှုများရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွက် ကိုဗစ် -၁၉ ကာကွယ်ဆေး လှူဒါန်းပေးခဲ့မှုများအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုလည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ရဟန်းတော်များနှင့် သီလရှင်များ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားများ ကိုလည်း လိုအပ်သည့်အကူအညီများ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် အတွက် ပြောကြားလိုကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်အခွန် ကောက်ခံမှုများလျှော့ချနိုင်ရေး အမြန်ဆုံးသဘောတူညီမှု ရရှိလိုပါကြောင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍လည်း စီမံချက် အသစ်ပြန်လည်ရေး ဆွဲနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်လိုပါကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်၍ ပုဂံဒေသနှင့် ဆီယံရိဒေသအကြား ခရီးသွားမိတ်ဖက်မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်မှုအား အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ကိုဗစ် -၁၉ ရောဂါထိန်းချုပ်မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အချိန်တွင် လေကြောင်းလိုင်းများအမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြား သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်က ၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်ဦးကာလတွင် အဆွေတော်၏ချစ်ကြည်ရေးခရီးလာရောက်မှုမှာ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ခိုင်မာစေပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနများအကြား မူဝါဒရေးရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် နားလည်မှု သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် အခွင့်အခါသင့်ပါကနှစ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ် စေလိုကြောင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ် - ၁၉ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် သုံးနှစ်စီမံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုများအတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အခွန်နှစ်ထပ် ကောက်ခံမှု လျှော့ချနိုင်ရေး သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားကဏ္ဍ တိုးမြှင့်ရေးအတွက်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကိုဗစ် ရောဂါကူးစက်မှုကိုအထိုက်အလျောက် ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အချိန်တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် လေကြောင်း သွားလာမှုအား အမြန်ဆုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ရည်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း။
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍတွင် ကမ္ဘောဒီးယားဘုန်းတော်ကြီးနှင့် သီလရှင် ၂၄၉ ပါးကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်တွင် ပညာ သင်ကြားခွင့်ပေးအပ်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် မိမိအနေဖြင့် ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း၊ မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယား ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင်လည်း ကမ္ဘောဒီးယား ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်ကို အပ်နှင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၇-၂၀၂၁ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတွက် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားမှုကို သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ နိုင်ငံများအနေဖြင့် စည်းလုံးမှုရှိရန်လိုကြောင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာနှင့် အာဆီယံ မျက်နှာစာတို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အပြုသဘောဆောင်ရပ်တည် ထောက်ခံပေးမှုများ အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် ဒေသအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံအတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မိမိတာဝန်ယူချိန် ကာလအတွင်း အကျဉ်းသား ၄၈၀၀၀ ကျော် ကိုပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ ပြီးဖြစ်ပြီး သင့်လျော်သည့်အချိန်တွင်လည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဆွေတော်၏ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုနှင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လိုမှုများအပေါ် မိမိအနေဖြင့် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် ယခုနှစ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ် အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါကြောင်း၊ အဆွေတော်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့်အပေါ် မိမိအနေဖြင့် ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံနှင့် ဒေသတွင်းကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ်မိပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ ကောင်စီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်၊ ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ ဦးကိုကိုလှိုင်၊ ဦးဝင်းရှိန်၊ ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း၊ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်မျိုးထွဋ်၊ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H. E. Mr. PRAK Sokhonn ၊ ဝါရင့်ဝန်ကြီး၊ စက်မှု၊ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဝန်ကြီး H.E. Mr. CHAM Prasidh၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီးနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောင်စီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. SOK Chenda Sophea၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး ဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် H.E. Mr. SRY Thamarong နှင့် H.E. Dr. KAO Kim Hourn၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် H.E. Dr. SOEUNG Rathchavy နှင့် H.E. Mrs. EAT Sophea၊ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) Lt. Gen. Hun Maneth၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. CHHOUK Bunna နှင့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။